News - ပရင်တာခေါင်းကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာထိန်းသိမ်းနည်း။
inkjet ပုံနှိပ်စက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ပုံနှိပ်ခေါင်း၏တည်ငြိမ်မှုသည်စက်၏အရည်အသွေးကိုသွယ်ဝိုက်စွာဆုံးဖြတ်သည်။ ပုံနှိပ်ခေါင်း၏သတ်မှတ်ထားသည့်ကုန်ကျစရိတ်သည်အတော်အတန်မြင့်မားပါက၊ ပုံနှိပ်ခေါင်း၏သက်တမ်းကိုမည်သို့တိုးချဲ့ရမည်၊ အစားထိုးကုန်ကျစရိတ်နှင့် ၀ တ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာကိုလျှော့ချပြီးပုံနှိပ်ခေါင်းကိုစနစ်တကျမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်နည်း။ ကြော်ငြာဆိုင်များနှင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက်အရေးကြီးသည်။ လူတိုင်းသည်ခေါင်းကိုပုံနှိပ်ရန်လူစိမ်းမဟုတ်ပါ။
inkjet ပုံနှိပ်စက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ပုံနှိပ်ခေါင်း၏တည်ငြိမ်မှုသည်စက်၏အရည်အသွေးကိုသွယ်ဝိုက်စွာဆုံးဖြတ်သည်။ ပုံနှိပ်ခေါင်း၏ပုံသေကုန်ကျစရိတ်သည်မြင့်မားပါက၊ ပုံနှိပ်ခေါင်း၏သက်တမ်းကိုမည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်၊ အစားထိုးကုန်ကျစရိတ်နှင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာကိုလျှော့ချပါက၊ inkjet ပုံနှိပ်စက် nozzles များကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာပြုပြင်ခြင်းသည်ကြော်ငြာဆိုင်များနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်သူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Ink နှင့် nozzle တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် inkjet ပုံနှိပ်စက်နှင့်ပုံ၏တည်ငြိမ်သောပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အဓိကအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ nozzle ကိုအကောင်းဆုံးပုံနှိပ်နိုင်သည့်အနေအထားတွင်ထားရန်၊ inkjet ပုံနှိပ်စက်၏မှင်အရည်အသွေးနှင့်လည်ပတ်မှုနည်းလမ်းအတွက်လိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။
1. ရောစပ်ခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်း။ စျေးကွက်တွင်မှင်တံဆိပ်များစွာရှိပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုစီမှထုတ်လုပ်သောမင်အရည်ပျော်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများနှင့်အသုတ်အသုတ်ရောနှောအရောင်သွန်းခြင်းနှင့်အရောင်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့် nozzle ကိုပိတ်ဆို့စေမိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောဓာတုတုံ့ပြန်မှုမှကျရောက်နေတဲ့သည်, ဒါကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပမှင်နှင့်မှင်ရောနှောဖို့တားမြစ်သည်။
2. အဆင့်နိမ့်အရည်အသွေးကိုသတိဖြင့်အသုံးပြုပါ။ အဆင့်နိမ့်သောမင်သည်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လျှော့ချနိုင်မှုအဆင့်အတန်းနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပုံဆွဲခြင်းနှင့်အမိန့်တင်သွင်းခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ကြီးမားသောခြယ်ပစ္စည်းအမှုန်များသည် nozzle ကိုအလွယ်တကူလောင်ကျွမ်းစေပြီးအမြဲတမ်း ၀ တ်စားမှုနှင့်စားသုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အရည်အသွေးနိမ့်သောမင်များ၏ဈေးပေါခြင်းကိုမလိုချင်ပါ။
မူရင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ အခြေခံအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုများနှင့်ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သော inkjet ပုံနှိပ်စက်ထုတ်လုပ်သူ၏မူလမှင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် inkjet ပုံနှိပ်စက်၏ပုံနှိပ်ခေါင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီးတည်ငြိမ်။ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူသည်ကာလရှည်အာမခံချက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် inkjet ပုံနှိပ်စက်၏မှင်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
၁။ ပိတ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း - inkjet ပုံနှိပ်စက်၏လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားသောအခါပုံနှိပ်သောခေါင်းနှင့်မင်ထပ်ကိုလေကိုသီးခြားထားရှိရန်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းခေါင်းအပြည့်ပိတ်ဆို့ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ပုံနှိပ်ခေါင်းကိုအပြည့်အဝစိုစွတ်အောင်ပေါင်းစည်းရန်သေချာပါစေ။
၂။ ပါဝါပိတ်ခြင်း - အပိုပစ္စည်းများကိုအစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ် inkjet ပုံနှိပ်စက်တွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမပြုလုပ်မီ၊ inkjet ပုံနှိပ်စက်ကိုအားသွင်းထားရမည်ကိုသတိရပါ။ အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြုတ်ခြင်းမပြုရ။
3. နိုင်ငံခြားမှအရာဝတ္ထုများကိုဖယ်ရှားခြင်း။ စက္ကူသုံးစွဲမှုမှအပအခြားအရာ ၀ တ္ထုများကို inkjet ပုံနှိပ်စက်၏ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တင်ခြင်းကိုတားမြစ်သည်။ ၎င်းသည်လှုပ်ရှားမှုအတွင်း nozz ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
4. လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း - ပွတ်တိုက်အားနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အသုံး ၀ င်သောပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်ထားပါ။ စက်ကိုအသုံးပြုခြင်းမပြုမီမြေပြင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး nozzle ကိုထိသောအခါအကာအကွယ်လက်အိတ်များကိုဝတ်ဆင်ရမည်။
၅။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း - အကယ်၍ ပုံနှိပ်ခေါင်းအားကျိုးပဲ့ပါက ဦး စွာ၎င်း၏ပြင်းထန်မှုကိုစစ်ဆေးပြီး၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်သက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်စဉ်အတွင်းဖြည်းဖြည်းပြုလုပ်ပါ။ ပုံနှိပ်သောခေါင်းကိုအမြဲတမ်းပျက်စီးစေသည့်ဆေးကိုမထိုးပါနှင့်။
1. အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆ: inkjet ပုံနှိပ်စက်ပတ်ပတ်လည်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုအာရုံစိုက်။ အပူချိန်သည် ၁၅ မှ ၃၀ ဒီဂရီဖြစ်ပြီးစိုထိုင်းဆမှာ ၄၀% မှ ၆၀% အတွင်းဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါကလေအေးပေးစက်များ၊ အစိုဓာတ်ဖြည့်စက်များ၊ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်များနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၂။ ဗို့အားတည်ငြိမ်မှု - အကြီးစားစက်ကိရိယာများပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၌၊ inkjet ပုံနှိပ်စက်၏လုပ်ဆောင်မှုအတွင်းတည်ငြိမ်သောဗို့အားထွက်ရှိမှုသေချာစေရန်စွမ်းအင်မြင့်ဗို့အားတည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ရန်အကြံပေးသည်။ ပိုပြီးတည်ငြိမ်ထုတ်လုပ်နှင့်လုပ်ငန်းများ၌။
3. ဖုန်မှုန့်ကိုလျော့ချပါဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ရာသီဥတုမှာခြောက်သွေ့သော၊ လေထန်။ မိုးရာသီနည်းသောကြောင့်လေ၊ သဲနှင့်ဖုန်များအလွယ်တကူဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အတွင်းပိုင်းလေလုံမှုကမကောင်းဘူး ပလပ်စတစ်သည် nozzle၊ board နှင့်ပရင်တာ၏အစိတ်အပိုင်းများထဲသို့ ၀ င် ရောက်၍ ငြိမ်သောလျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုနှင့် nozzle ပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်လျော်သောအစီအမံများကိုယူပါ။ အကာအကွယ်အစီအမံများအလွန်လိုအပ်သည်။
Yinghe ကုမ္ပဏီသည်အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ ၁၀၀% အသစ်သွင်းကုန်အသစ်များနှင့်အမြောက်အများကိုလျှော့စျေးဖြင့်သွင်းကုန် Printer ခေါင်းများဖြစ်သော Epson, HP, Canon, Muto, Ricoh, Xaar စသည်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။